Tababare Pep Guardiola oo sharraxay qorshahooda la soo saxiixashada Jadon Sancho – Gool FM
(Manchester) 02 Luulyo 2020. Wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda Manchester City ay xagaagan isu diyaarineyso dib u dhis ay ku sameynayaan safkooda xilli ciyaareedka, waxaana xiddigaha lala xiriiriyay ka mid ah laacibka kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Laacibka Jarmalka ah ee Leroy Sane ayaa cagta saaraya waddadii uu ugu dhaqaaqi lahaa Bayern Munich, waxaana taasi ay soo dadajisay in City ay baadi goob u gasho xiddig ka ciyaara garabka.
Balse macallinka Man City ee Pep Guardiola ayaa si cad isaga fogeeyay inay la soo saxiixdaan Sancho, waxaana uu guud ahaan meesha ka saaray suuro galnimada ay kula soo saxiixan karaan laacibkoodii hore.
20-jirka reer England ayaa sanadkii 2017 ka dhaqaaqay Etihad si uugu biiro Dortmund, waxaana tan iyo markaas uu noqday laacib sare oo ay saxiixiisa ku hardamayaan qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, Macallin Guardiola ayaa qiray inaysan dooneyn la soo saxiixashada Sancho, inkastoo uu qiray inay kooxdiisa suuqa xagaagan xiddigo cusub kala soo saxiixan doonto.
“Maya, maya, maya” ayuu yiri tababaraha Man City markii wax laga weydiiyay damacooda ku aaddan Sancho.
“Isagaa go’aansaday inuu tago, muxuu hadda u go’aansanaa inuu soo laabto?
“Waxaan dooneynay inuu iska joogo sida Eric Garcia iyo Phil [Foden] oo kale, balse waxa uu go’aan u qaatay sida hadda uu u qaatay Leroy oo kale .
“Markii uu go’aansanayay inuu u dhaqaaqo Dortmund, ma ahayn ujeedkiisa inuu hal sano kaddib soo laabto” ayuu macallinkii reer Spain hadalkiisa ku sii daray.
Manchester United ayaa la rumeysan yahay inay hoggaanka u heyso loollanka loogu jiro saxiixa Jadon Sancho, xilli Chelsea iyo Liverpool lagu soo warramayo inay iyaguna xiiseynayaan.
Dhanka kale City macallinkeeda Guardiola ayaa xaqiijiyay inay xagaagan isku dayi doonaan inay daboolaan baahida boosas dhowr ah sida difaaca dhexe, khadka dhexe iyo weerarkaba.
“Boosaska qaar, waa inaan wax ka baddelnaa, ma ahan tayo liidata, Vinny [Kompany] iyo David [Silva], halka Fernandinho iyo Sergio [Aguero] ay halsano kaga harsan tahay heshiiskooda” ayuu yiri Pep.